यी हुन् शेयरमा नयाँ रेकर्ड बन्नुका खास कारण - Aarthiknews
काठमाडौं । गत सातादेखि नै बुलिस ट्रेन्डलाई समातेको नेपालको शेयर बजारले आइतबार नयाँ इतिहास रचेको छ । नेप्सेमा आईतवार अहिलेसम्मकै धेरै ३ अर्ब ६० करोडको कारोबार भएको छ । यो नेप्सेको इतिहासमा सबैभन्दा बढि कारोवार रकम हो ।
केहिसमय देखी बजार सुधारउन्मुख भएपनि यति ठूलो वृद्धि देखिनुको कारण भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमनको हल्ला हो । ‘शेयर बजारप्रति अनुदार’ व्यक्ति मानिने अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनपछि नयाँ आउने मन्त्री बजारप्रति उदार हुनसक्ने अनुमान लगाउँदै लगानीकर्ता उत्साहित बनेका हुन् ।
शनिबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियभाको सदस्य मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा अनौपचारिक सहमति भएको समाचार बाहिर आयो । राष्ट्रियसभामा यही फागुन १९ गतेदेखि १९ जना सांसदको पद रिक्त हुँदैछ । जसका लागि १८ नयाँ सांसदको निर्वाचन भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने रिक्त हुन लागेको एक सिटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा छन् । सो स्थानमा वामदेव गौतम आउने भएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा संघीय संसदको सदस्य नरहने र योसँगै अर्थमन्त्रीबाट हट्ने अनुमानसहित बजार बढेको हो ।
त्यस्तै, केही सातादेखि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावका बावजुद पनि ब्याजको आधार दर घटिरहेको छ । आधार दर घट्दा ऋणको ब्याज पनि कम हुन्छ । बैंकहरुले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिरहेका बेला सजिलैसँग पैसा प्रयोग हुने शेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । ऋणको माग नभएर तरलता थोरै बचतमा रहेका बेला त्यो तरलता बैंकहरुले शेयर बजारमा खन्याउन थालेका छन् ।
ब्रोकर कम्पनी धाएरै वा आफ्ना पुराना ग्राहकलाई फोन गरेर डाकेरै सस्तोमा शेयर ऋण लैजान मार्के्टिङ सुरु भएको छ । चैत ५ गते अवकाश हुन लागेका गभर्नरले जाँदाजाँदै मौद्रिक समीक्षामार्फत सेयर बजारका लागि बम्पर प्याकेज ल्याउँछन् भन्ने समाचारहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। जसले लगानीकर्तालाई शेयरमा लगानी गर्न उत्तेजित बनाएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोषले स्टक डिलरको काम गर्न कम्पनी नै खडा गरिसकेको छ । यसरी सरकारी निकाय नै बजारमा प्रवेश गर्ने पक्का भएपछी स्वाभाविक रुपमा लगानीकर्ताको मनोबल बढेको देखिएको छ । यिनै कारणहरुले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से सूचकले छलाङ मारेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस्तो रह्यो आइतबारको कारोबार
साताको पहिलो कारोबारका रुपमा बजार खुलेको पहिलो २० मिनेटमा ४३ अंक उक्लिएको थियो। त्यसपछि विस्तारै घटेर १९ अंकको वृद्धिमा बसेको थियो। त्यो बीचमा केही लगानीकर्ता ‘नाफा बुक’ गर्न्तिर लाग्दा सूचक ४३ अंकबाट तल आएको थियो।
यसैबीच अर्थमन्त्री हट्ने हल्ला सनसनीपूर्ण बन्यो । उता प्राविधिक विश्लेषणहरुले बजारमा अर्को हल्ला चलाए ‘अब बजार रोकिने अर्को विन्दु १६ सयमाथि हो’ । त्यसपछि फेरि लगानीकर्ताहरु शेयर बेचेर ‘नाफा बुक’ गर्नुको साटो लगानी बढाउनतिर लागे । माग अस्वभाविक रूपमा बढेपछि सूचक ७५ अंकसम्म उक्लिए थियो ।
यद्यपि, आइतबार बजारमा उतारचढाव पनि तीव्र देखियो । तीव्र उतारचढावका बीच १ बजेसम्म नेप्से परिसूचकमा ठूलो उकालो देखिएको थियो । कारोबार रकम पनि यस अवधिमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको थियो । १ बजेर २१ मिनेट जादा ७५ अंकले उकालो लागेर १ हजार ५ सय ९ अंक भन्दा माथि पुगेको नेप्से परिसूचक त्यसपछि पुनः ओरालो लाग्यो । १ बजेर ५० मिनेसम्म जादा १ हजार ४ सय ८० मा झरेको परिसूचक त्यसपछि पुनः उकालो लाग्यो ।
यसरी उतारचढावका बीच नेप्से परिसूचक ६९.५६ अंकले बढेर १ हजार ५ सय ४ दशमलव १४ विन्दुमा पुगेको छ भने नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आइतबार ३ अर्ब ६० करोड ८५ लाख २६ हजार ३५४ बराबरको कारोवार भयो ।